लोकतन्त्र दिवस ओझेलमा, जनताको दुःख उस्तै – Chitwan Post
भरतपुर । नारायणगढको फुटपाथमा ठेलामा फलफूल तथा तरकारी बेच्ने सुमित्रा परियारको दुःख एक दशकदेखि उस्तै छ । उनी २०६२÷०६३ जनआन्दोलन–२ को समयमा पनि फुटपाथमै थिइन्, अहिले पनि उस्तै अवस्थामा । देशमा लोकतन्त्र ल्याउन उनी पनि आन्दोलनमा होमिएकी
लोकतन्त्रले के दियो त ? प्रश्न भुइँमा खस्न नपाउँदै उनले भनिन्, ‘हामीलाई के दिनु, हाम्रो दुःख उस्तै छ । जे दिनु नेतालाई दियो । जनताको दुःख उस्तै छ । जनताले लोकतन्त्र त ल्याए, तर के पाए ? हात लाग्यो शून्य ।’ उनले जनताले लोकतन्त्रको खासै अनुभति गर्न नपाएको बताइन् ।
लोकतन्त्र दिवसमा सरकारको तर्फबाट औपचारिक कुनै कार्यक्रम भएनन् । चितवनका राजनीतिक दलहरुले कुनै औपचारिक कार्यक्रमहरु गरेनन् । लोकतन्त्र दिवसको दिन सरकारले दिने गरेको सार्वजनिक बिदा पनि अहिलेको सरकारले कटौती गरेको छ । बिदा कटौतीको आलोचन गर्नेहरुको पनि कमी छैन । जसका कारण लोकतन्त्र दिवस जनताको माझ ओझेलमा पर्दै गएको अनुभूति भएको छ ।
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले जनताको नासो जनतालाई नै सुम्पेको दिनको सम्झनामा वैशाख ११ गते लोकतन्त्र दिवस मनाइँदै आएको थियो । तर, पछिल्लो समय लोकतन्त्र दिवसमा कुनै गतिविधि नभएपछि यो ओझेलमा पर्दै गएको अनुभूति जनतालाई भएको छ । २०६३ वैशाख ११ गते नेपालमा लोकतन्त्र स्थापना भएको थियो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले २०५९ जेठ ८ गते विघटित संसद २०६३ वैशाख ११ गते पुनःस्थापना गरेका थिए ।
नेकपा एमालेका चितवन जिल्ला उपाध्यक्ष तेजन्द्रबहादुर खड्काले लोकतन्त्रले राजनीति उपलब्धि ल्याएको बताए । उनले भने, ‘लोकतन्त्रले जनतालाई केही पनि दिएन भन्ने कुरामा म विश्वास गर्दिन । लोकतन्त्रले धेरै दिएको छ, तर जनतामा लोकतन्त्रले केही नदिएको अनुभूति भएको हुनसक्छ ।’
उपाध्यक्ष खड्काले लोकतन्त्रले नै देशमा नयाँ संविधान बनेको र देशलाई संघीयतामा लगेको बताए । उनले भने, ‘लोकतन्त्र विस्तारै अनुभूति हुने कुरा हो, सबैका अधिकार समेटिएको संविधान बनेको छ ।’
उपाध्यक्ष खड्काले लोकतन्त्रले भष्ट्राचार न्यूनीकरण र विकासले तीव्र गति लिन नसकेको स्वीकार गरे । उनले भने, ‘लोकतन्त्रले राजनीति उपलब्धि दियो र आर्थिक उपलब्धि दिएको छैन । तीव्र रुपमा आर्थिक उपलव्धि दिन जरुरी छ ।’
नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापति जीतनारायण श्रेष्ठका अनुसार लोकतन्त्रले २४० वर्ष लामो राजसंस्थाको विधिवत् अन्त्य ग¥यो । नयाँ संविधान दियो । मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएको ऐतिहासिक घोषणा ग¥यो । सबैले आफ्नो हक अधिकार पाए । उनका अनुसार अबको युग समृद्धिको हुनुपर्छ । ‘लोकतन्त्रले सबै दिएको छ, समृद्धि दिएको छैन, अब समृद्धि दिनुपर्छ । अनि बल्ल लोकतन्त्रको सार्थक परिणाम निस्कन्छ ।’ उनले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष मिलेर देशलाई समृद्धितर्फ लानुपर्ने बताए ।
कहिले बन्छ पीडितका घर ?